« … Tany sarobidy, masina tokoa ! » | NewsMada
« … Tany sarobidy, masina tokoa ! »
Volamena, vatosoa, solika,… Hazo isan-karazany, zavamaniry tsy tambo isaina… Toerana kanto voajanahary, harena anaty ranomasina, velaran-tany midadasika… Ireo rehetra ireo ahafahana manaporofo fa « Tany sarobidy » tokoa ity Nosy ity. Fomba amam-panao, tahotra an’Andriamanitra, tahotra ny tody sy ny tsiny, fihavanana… Maneho fa masina i Madagasikara. Firenena sarobidy sy masina kanefa miandry fanampiana avy any ivelany vao velona. Malagasy mahantra. Isam-batan’olona, mibaby trosan’ny vahiny, sns.
Mahavariana fa tsy mahatsapa ny maha sarobidy sy ny maha masina ity Nosy ity ny Malagasy « tompony » fa ny vahiny no mahatazana izany. Hitany avokoa ny toerana misy ny harena sarobidy rehetra na ny any an-kibon’ny tany, na ny anaty ranomasina sy ny eto ambonin’ny tany. Na manana maso matsilo tahaka inona aza ny vahiny, tsy ho afa-maka ny haren’i Madagasikara (anisan’ny maha sarobidy azy) raha tsy eken’ny « tompony » ny hanaovana izany.
… Vonoan’olona, fisolokiana, fifandrafiana, fivarotana tanindrazana, sns. Mbola masina ve ity tany ity ? Toa sarotra ihany ny hamaly io fanontaniana io satria ireo tranga voalaza ireo mametraka avy hatrany fa very sy maty hasina i Madagasikara sy ny Malagasy. Mila haverina ny hasin’ity tany ity. Ny Malagasy ihany no mamerina azy. Averina amin’ny fomba malagasy fa tsy sanatria famerenan-kasina ho fanandratana ny hevi-petsin’ny hafa toy ny natao hatramin’izay ihany no ndeha hotohizana.
Midika zavatra maro ny fiverenan-kasina. Goavana indrindra amin’izany ny fahatsapan-tena fa Malagasy tompon’i Madagasikara sy ny momba azy rehetra. Iray amin’ireny ny hoavin’ny taranaka. Tsy ho sahy hanao ankinanga azy io tahaka izao miseho ankehitriny izao ny Malagasy raha tafaverina ny hasiny.
Rehefa mitombo hasina ny Malagasy, ho fantatry ny « tompony » ny zava-tsarobidy rehetra ananan’i Madagasikara. Ho saropiaro amin’ny taniny izy !